Iza ity lehilahy ity, ary ahoana no nahatonga azy ho mpianatr’i Jesosy?
IZA ilay mpanompon’Andriamanitra tsara indrindra?... Jesosy Kristy. Afaka ny ho tahaka azy ve isika, araka ny hevitrao?... Lazain’ny Baiboly fa modely tokony harahintsika izy. Manasa antsika ho tonga mpianany izy.
Inona no takina amin’ny mpianatr’i Jesosy, araka ny hevitrao?... Misy zavatra maromaro. Tsy maintsy mianatra momba azy aloha isika. Tsy izay ihany anefa. Tsy maintsy tena mino izay lazainy koa isika. Amin’izay, dia hanao izay asainy hatao isika.
Maro ny olona milaza fa mino an’i Jesosy. Tena mpianany tokoa ve izy ireny, araka ny hevitrao?... Tsia, tsy mpianany ny ankamaroany. Mety ho mandeha any am-piangonana ireny olona ireny, nefa tsy maka fotoana akory mba hianarana ny zavatra nampianarin’i Jesosy. Ireo manahaka an’i Jesosy ihany anefa no tena mpianany.
Andeha isika hiresaka momba ny olona sasany lasa mpianatr’i Jesosy, tamin’izy teto an-tany. I Filipo no anisan’ny voalohany tamin’ireny. Lasa nankany amin’i Natanaela namany (nantsoina koa hoe Bartolomeo) i Filipo. Hitanao mipetraka eo am-body hazo i Natanaela eto. Hoy i Jesosy, rehefa tonga nanatona azy i Natanaela: ‘Jereo, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka.’ Gaga i Natanaela ka nanontany hoe: “Ahoana no ahafantaranao ahy?”
Iza no antsoin’i Jesosy ho tonga mpianany eto?
‘Tamin’i Filipo mbola tsy niantso anao dia hitako teo ambany aviavy ianao’, hoy i Jesosy. Gaga be i Natanaela satria tena fantatr’i Jesosy ilay toerana nisy azy, ka hoy izy hoe: ‘Ianao no Zanak’Andriamanitra; ianao no Mpanjakan’ny Israely.’—Jaona 1:49.
Jodasy Iskariota, Jodasy (antsoina koa hoe Tadeo), Simona
Nisy olon-kafa lasa mpianatr’i Jesosy, iray andro talohan’i Filipo sy Natanaela. Anisan’izany i Andrea sy Petera, rahalahiny, ary i Jaona; angamba anisany koa i Jakoba, rahalahin’i Jaona. (Jaona 1:35-51) Niverina nanjono indray anefa izy efatra mirahalahy ireo, tatỳ aoriana. Indray andro, dia nahita an’i Petera sy Andrea nandatsaka ny haratony tao anaty ranomasina i Jesosy, rehefa nitsangantsangana teny amoron’ny Ranomasin’i Galilia. ‘Ndao hanaraka ahy’, hoy izy tamin’izy ireo.
Jakoba (zanak’i Alfeo) sy Tomasy ary Matio
Nahita an’i Jakoba sy Jaona koa izy rehefa nandeha lavidavitra kely. Teo am-panamboarana ny haratony niaraka tamin’ny rainy izy ireo tamin’izay. Nasain’i Jesosy nanaraka azy koa izy mirahalahy. Inona no ho nataonao raha niantso anao i Jesosy? Ho tonga dia nanaraka azy ve ianao?... Fantatr’ireo lehilahy ireo hoe iza i Jesosy. Fantany hoe Andriamanitra no naniraka azy. Najanony avy hatrany àry ny fanjonoana, ka nanaraka an’i Jesosy izy ireo.—Matio 4:18-22.
Natanaela sy Filipo ary Jaona
Nanao zavatra tsara foana ve ireo lehilahy ireo rehefa lasa mpianatr’i Jesosy?... Tsia. Tadidinao angamba fa niady hevitra izy ireo momba ny hoe iza taminy no ambony indrindra. Nihaino an’i Jesosy anefa izy ireo ary vonona hiova.Mety ho lasa mpianatr’i Jesosy koa isika raha vonona hiova.
Jakoba (rahalahin’i Jaona), Andrea, Petera
Nanasa ny olona rehetra ho tonga mpianany i Jesosy. Nisy filoha tanora sady nanankarena tonga teo aminy, indray andro, ary nanontany hoe ahoana no hahazoany fiainana mandrakizay. Nolazain’io lehilahy mpanan-karena io fa efa nankatò ny didin’Andriamanitra hatramin’ny fahazazany izy. Tamin’izay i Jesosy no nanasa azy hoe: ‘Andao ho mpianatro.’ Inona no nitranga raha fantatrao?...
Nalahelo be ilay lehilahy rehefa fantany fa tsara kokoa ny ho lasa mpianatr’i Jesosy fa tsy ho mpanan-karena. Tsy lasa mpianatr’i Jesosy izy satria naleony ny volany toy izay Andriamanitra.—Lioka 18:18-25.
Nifidy apostoly 12 tamin’ireo mpianany i Jesosy, rehefa avy nitory nandritra ny herintaona sy tapany. Lehilahy nirahina hanao asa manokana no atao hoe apostoly. Iza avy no anaran’izy ireo, raha fantatrao?... Andao hoe hojerentsika! Ireto ny sariny, ka vakio ny anaran’izy ireo. Avy eo dia lazao tsy an-kijery sary izany anarana izany.
Iza ireto vehivavy ireto izay nanampy an’i Jesosy rehefa nandeha nitory izy?
Lasa ratsy toetra ny iray tamin’ireo apostoly ireo, tatỳ aoriana. Jodasy Iskariota no anarany. Nisy mpianatra hafa nofidina ho apostoly hisolo azy. Iza no anarany, raha fantatrao?... Matia. Lasa apostoly koa i Paoly sy Barnabasy tatỳ aoriana, nefa tsy anisan’ny 12 izy ireo.—Asan’ny Apostoly 1:23-26; 14:14.
Tia ankizy i Jesosy, araka ny hitantsika tao amin’ny Toko 1. Fa nahoana?... Satria fantany fa nety ho lasa mpianany koa ireny ankizikely ireny. Matetika mantsy ny ankizy no milaza zavatra manaitra ny olon-dehibe ka mahatonga azy ireny hihaino, sy haniry hianatra bebe kokoa momba ilay Mpampianatra Lehibe.
Maro koa ny vehivavy lasa mpianatr’i Jesosy. Nisy tamin’izy ireny niaraka taminy, rehefa nandeha nitory tany amin’ny tanàna hafa izy. Anisan’izany i Maria Magdalena sy Johana ary Sosana. Angamba nahandro ny sakafon’i Jesosy sy nanasa ny fitafiany koa ireny vehivavy ireny.—Lioka 8:1-3.
Te ho mpianatr’i Jesosy ve ianao?... Tadidio fa tsy ampy ny milaza fotsiny hoe mpianatr’i Jesosy aho. Tsy maintsy asehonao amin’ny zavatra ataonao fa mpianatr’i Jesosy ianao, na aiza na aiza misy anao, fa tsy hoe any am-pivoriana fotsiny. Rehefa aiza isika no tokony ho hita fa mpianatr’i Jesosy?...
Tokony ho hita izany ao an-trano, sy any am-pianarana koa. Tsy tokony hohadinointsika mihitsy fa raha tena mpianatr’i Jesosy isika, dia tsy maintsy manahaka azy mandritra ny andro, isan’andro, ary na aiza na aiza misy antsika.
Aiza avy no tokony hahitana fa mpianatr’i Jesosy isika?
Andeha hovakintsika izay lazain’ny Baiboly momba ny mpianatr’i Jesosy ao amin’ny Matio 28:19, 20; Lioka 6:13-16; Jaona 8:31, 32; 1 Petera 2:21.
Andraikitra lehibe ny manara-dia an’i Kristy. Nohazavain’i Jesosy izay tafiditra amin’izany. Tafintohina ny olona sasany rehefa nandre ny teniny.
Hizara Hizara Ireo Lasa Mpianatr’i Jesosy